University of Tasmania - Dzidza Overseas mu Australia
guta : Hobart
Acronym : NZIRA
inotangwa : 1846
Musakanganwa kuti kurukura University of Tasmania
Kunyoresa pa University of Tasmania
The University of Tasmania (NZIRA) ari paruzhinji tsvakurudzo yunivhesiti zvikurukuru iri Tasmania, Ositireriya. Pamutemo rakavakwa 1890, yakanga yunivhesiti wechina hwaizogadzwa Australia, kunyange Kristu College, rwakazokura vemumapato kuyunivhesiti mu 1929, yakatangwa 1846 uye anoramba mukuru chimiro dzidzo yepamusoro munyika. The University of Tasmania ari sandstone yunivhesiti uye ari nhengo dzakawanda Association of Commonwealth Africa uye theAssociation kumabvazuva Asian Institutions Yepamusoro Learning.
The yunivhesiti rinopa Rokutenderwa uye akapedza siyana zvirongwa mune zvakawanda nokuranga, uye ane Links pamwe 20 Mazvikokota tsvakurudzo Kudya, pamwe tsvakurudzo nzvimbo uye fakaroti kunobva pakutsvakurudza nzvimbo; zvizhinji izvo sechinoitika munyika uye vatungamiri rese makwikwi. The yunivhesiti yacho Institute for Marine uye Antarctic Studies vakabatsira zvakasimba kuti yunivhesiti yacho kakawanda 5 Rating takatopinda (zvakanaka pamusoro mureza nyika) zvakaisvonaka pakutsvakurudza paakavapa neDare Australian Research Council. The University zvakare anomununura tertiary dzidzo paAustralian Maritime College, national muzinda mugungwa dzidzo, nokudzidziswa uye tsvakurudzo.
Yunivhesiti iri zvikuru kuti kuzvipira wayo zvakaisvonaka pakudzidza uye nokudzidzisa. Zvakange yandaipuwa pamusoro 10 tsvakurudzo mumayunivhesiti muAustralia uye pamusoro zviviri muzana pasi pose muna Yedzidzo chepamusoro neWorld Africa. Yunivhesiti uyewo mamwe kudzidzisa mibayiro kupfuura mamwe Australian yunivhesiti kubudikidza Australian Government Office kuti Kudzidza Nokudzidzisa Mumutauro 2012.
Kudzidza paUniversity Tasmania anogona kutora mimwe kudarika yawanga uchitarisira. dungwerungwe yedu yakasiyana rworwendo, mudzidzi exchanges uye zvakaitika kudzidza akagadzirirwa kuumba vatungamiriri munyika yose munguva yemberi.
The University of Tasmania ruzivo inokinura zvinogona yevanhu. Vakapedza kudzidza kwedu takashongedzerwa uye akafemerwa kuumba uye wokubvuma mikana uye nematambudziko ramangwana sezvo kwapera communicators, zvikuru nyanzvi uye vagari tsika nomazvo panzvimbo iyoyo, national, uye vanhu pasi pose.
Your makore yunivhesiti havasi kuda kudzidza, ngatiite kuva vakatendeseka. Unoda kuva pakati nepakati basa rakaoma uye zvizhinji kutamba. Zvino Tasmania ndiyo nhandare wakakwana. Kuva chitsuwa, takapoteredzwa waterways. Funga yacht, Kayaking, kushambira nokutarisa.
Tine vakanyarara renje kupfuura mamwe nzvimbo panyika - uye zviri mberi pasuo mumaguta edu. Hiking, gomo cu, climb uye musasa zviri nyore masikati kana vhiki basa. Uye tine mhuka pano kuti havambokwanisi dziripo kumwe munyika. Iyi inzvimbo mumasango uye zvikuru anongoti, runako.
Asi kana guta kunonyanyisa maitiro enyu, Tasmania nokukupai akafukidzwa. zvokudya zvedu, unyanzvi uye tsika Chiitiko chinhu inopisa nyaya iri toerisme mags pasi pose. Nechikonzero chakanaka. Hatina mubayiro kuhwina mitambo gore rwakapoteredza, dzinokatyamadza streetscapes, uye café netsika kuti hakumboperi.
Chinhu chakanakisisa, ari pedyo nepedyo ari Uni kuna Tasmania vaJehovha vakawanda drawcards anobvumira yakawanda nguva kuti vawane pakati payo. Oh - uye isu uine cleanest mhepo munyika ... wakakwana nokuda vachiridza kubvisa cobwebs kubva usiku guru (rwacho mabhuku).
kurima & Environmental Science
akitekicha & patani
kadambari & iT
dzidzo & Teaching
kutapa nokunyora nhau, Media & Communications
mumhanzi, utsanzi & Performing Arts
The University of Tasmania kwakatangwa 1 Ndira 1890, mushure abolition kuti mhiri kwemakungwa dzidzo vakasunungurwa vakakwira mari. It pakarepo akatora pamusoro basa Tasmanian Council for Education. Richard Harris Deodatus Poulett, akanga refu waitsigira pokugadzwa kuyunivhesiti, akava wadheni kwayo weSeneti rokutanga. The madhigirii kutanga kudzidza vakabvuma panguva kumhanya; uye zvitupa vakanga paakavapa muna June 1890. The yunivhesiti rakapiwa mukana dzemaoresa sandstone chivakwa pamusoro Queens Domain muna Hobart, kare kuti High School of Hobart, kunyange akanga was nevamwe kusvikira mid-1892. Izvi pakupedzisira chakazozivikanwa se University House. lecturers vatatu vakatanga kudzidzisa vadzidzi gumi kubva 22 Kurume 1893, kamwe University House akanga kunatsiridzwa. Nhengo dzeParamende kouranda sechinhu zvisingakoshi hwokusanyara akaita yunivhesiti vepakutanga kuvapo chokwadi. Kupfungwa wacho kukurudzirwa hadzi vadzidzi chakasimudzira tsoropodzo. James Backhouse Walker, Gweta omunharaunda uye zvishoma Vice-chanzera, akatasva akashinga kudzivirira. Pakazosvika World War First kwaiva pamusoro vadzidzi zana wandei Tasmanian kudzidza zvaiva zvakakurumbira mutemo uye zvematongerwo enyika.
Maererano chanzera Sir John Morris, kubva 1918 kusvikira 1939 tsika achiri 'limped pamwe'. Anokudzwa mudonzvo akanga agadzwa, akadai dzakaitika William Jethro Brown, yefizikisi uye mathematicians Alexander McAulay uye mwanakomana wake Alexander Leicester McAulay, classicist RL Dunbabin, uye muzivi uye polymath Edmund Morris Miller. MuNzvimbo yaimbova High School Hobart, Zvivako outgrown zvachose, asi hurumende wehurumende akanga anononoka mari imwe kembasi itsva.
mu 1914 yunivhesiti akateterera King George V nokuda Letters Patent, izvo kukumbira akapa. The Letters Patent, dzimwe nguva unonzi Royal Charter, akapa yunivhesiti yacho madhigirii chokuva yakaenzana hwakagadzwa mumayunivhesiti of United Kingdom, apo neShanduro dzakadaro aivapo.
Panguva Second World War, ukuwo Optical Munitions Annexe aibatsira hondo nesimba, omunharaunda kudzidza, Pavanotsiva musoja zvidzidzo, vakadzidzisa tsama vadzidzi. New post-hondo mudonzvo, vakawanda mhiri kwemakungwa ruzivo, chakatsindirwa kuti kubviswa kuti zvakakwana zvivako pana Sandy Bay pamusoro tsaru chivhorovhoro Range. Chanzera Sir John Morris, uyewo Chief Justice, kunyange munhu simba muvandudzi, antagonized zvidzidzo kubudikidza authoritarianism ake. Mutevedzeri-chanzera Torliev Hytten, imwe inozvikudza Economist, akaona kukakavara yepamusoro apo Kutama kuna Sandy Bay akanonoka. Mutsamba vaneshungu yakazarukira Premier, Uzivi Professor VaSydney Orr Vakurudzirwa navatungamiriri hurumende kupinda wakateya 1955 Royal Commission kupinda yunivhesiti. Komisheni Mushumo akabvunza rakakura zvinhu zvose kuyunivhesiti uye dare kanzuru. Staff vakafara, apo pasi vakuru vakapopota vachiti.
The 1965 Martin Report akasimbisa bhurasho basa kuti kumayunivhesiti, uye mamwe mazano basa nokuda mumakoreji ose yemhando dzidzo. The Hurumende Tasmanian zvakakodzera akasika Tasmanian College of Education Advanced (TCAE) mu 1966 sited paGomo Nelson pamusoro yunivhesiti. Pakutanga Chaibatanidza The School of Art, ari Conservatorium of Music uye Hobart Teachers College. mu 1971, mumwe Launceston kembasi of TCAE pakaziviswa. Ndivo yenhamo sarudzo, sezvo zviitiko pamusoro anotevera makore akaratidza. Zvainzi kuti TCAE akaedza kukwikwidzana kuyunivhesiti, kwete mukwanisi izvozvo.
mu 1978 Yunivhesiti Tasmania akatora vaviri mapoka inopiwa TCAE muna Hobart, Pharmacy uye kuongorora, anotevera mushumo Professor Karmel, uye mumwe ne H.E. Cosgrove. Zvimwe TCAE makosi muna Hobart vakatamira Launceston. The kuziva ezvinhu matatu vakaparadzana makosi nedzidzo mudzidzisi muna State vaisagona kugara, zvisinei, uye kutevera mamwe mashoko maviri, yunivhesiti vaumbe mapoka vasara Hobart ritenderane of College of Education Advanced mu 1981, wakamutsa nhamba awo 5000. The Launceston kembasi of TCAE zita pachayo iri Tasmanian State Institute of Technology (mira).
mu 1987, Yunivhesiti Council dzakasarudza kutaura TSIT kutaurirana munhu batanidzo kuti minmise kuramba kunetsana. The 'Dawkins Revolution’ uye 'dzibatane National hurongwa’ yakapa rubatsiro mushure urongwa ichi. The Tasmanian State Institute of Technology akava Newnham ritenderane ari kuyunivhesiti iri 1 Ndira 1991, chaizvo 101 makore yunivhesiti yacho kuvambwa. A kembasi chitsva panguva Burnie pamusoro North-West Coast pamusoro Tasmania yakavhurwa 1995, uye akazova seshanduro Achiko Coast ritenderane. Kunyange akabatana sangano rakaramba zita yekare University of Tasmania, sedzimwe panguva masangano itsva munguva dzaitongwa musika mauto pane rupo voruzhinji mari anotonga ayo ramangwana.
The Australian Maritime College (AMC), rakamiswa yakabatana Newnham ritenderane, revatema pamwe yunivhesiti iri 2008. The University of Tasmania uye TasTAFE ikozvino uri chete muzvikoro tertiary dzidzo muTasmania.
Unoda kurukura University of Tasmania ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University of Tasmania musi Map
Photos: University of Tasmania pamutemo Facebook
University of Tasmania wongororo
Join kukurukura pamusoro University of Tasmania.